मंगल ग्रहमा महाकवि देवकोटाको सालिक | कृष्ण बजगाईं
मंगल ग्रहमा महाकवि देवकोटाको सालिक
कथा कृष्ण बजगाईं May 18, 2013, 12:38 am
साहित्यकार त्रिलोकनाथ शर्माको योजना सुनेर सबै चकित भए । ‘वाह क्या विचार ! यस्तो योजनाले नेपाली साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ ।’ एक डायोस्पोरिक गजलकारले विचार राखे ।
‘पाकशास्त्र’ देखि ‘कोकशास्त्र’, ‘मोफसल’ देखि ‘डायोस्पोरा’ सबै विषयमा उनको कलम उतिकै चलको छ । ... यीनी नेपाली साहित्यमा पहिला ब्यक्ति हुन् ।’ उनका बारेमा वरिष्ठ समालोचक तथा स्तम्भकार प्रा. डा. नित्यानन्द शास्त्रीले पनि यति चाहीँ बोलेका छन् । समालोचक शास्त्रीको उक्त भर्नाइ उनको हरेक पुस्तकको पछिल्लो पानामा पढ्न पाईन्छ ।
‘हो नि । तपाईंहरु कै सहयोगले यो कार्य सफल हुने छ । तर... तर....।’ त्रिलोकनाथले अलिकति खेल्ने ठाउँ राखेर वाक्य पुरा गरेनन् ।
‘तर...? के भन्न खोज्नु भएको साहित्यकारज्यू ? पुरा भन्नोस् !’ कवि उदासीलाई पुरा वाक्य सुन्न हतार भयो ।
‘कुरा के भन्दा नि... आजकल समावेशी जमाना छ । मैले साथीहरुलाई समावेशी हिसावले नाम शिफारिश गर्नु भनेको थिएँ । साथीहरुले देवकोटाको नाम लिनु भयो ।’ कहिल्यै नसोँचेको विष वृक्ष कवि उदासीको मनमा त्रिलोकनाथले उमारी दिए ।
‘कविजी, म तपाईंलाई नै फोन गरौंला भन्दै थिएँ । कुरा के भने नि पैसा अलिअलि संकलन भैरहेको छ । तर... अलिक विवादका स्वरहरु सुनिदैछ । सबैका कुरा सुनेर निर्णय गर्नु पर्ने भयो ।’ त्रिलोकनाथले जुँगा मुसार्दै भने ।
‘सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पनि आइरहेको छ । खै......।’ त्रिलोकनाथले कवि भुमरीले नसोचेको कुरा कोट्याइदिए ।
‘फकिरजी, चिनेँ चिनेँ । तपाईंले दिनु भएको चन्दा रकम प्राप्त भयो । तर कुरा अलिक बिग्रन लागे जस्तो छ ।’ त्रिलोकनाथले आफ्नो योजना अनुसार कुरा राखिहाले ।
‘सही कुरा उठाउनु भयो । त्यही भएर त तपाईंलाई हामीले जो अविभावक मानेका छौं । त्यत्रो नेपाललाई पाल्ने सिंगो तराईको अपमान हो यो । मधेशी भनेर हेपेको हो..........। अगर...।’ कवि फकिरले फोनमै भाषण गर्न थाले । बाँकी कुरा नसुनी त्रिलोकनाथले फोन काटी दिए ।